In Heart of Beast Puppet iyo Masraxa Maskaxda
Sawirada waxyaabo ka soo jeeda dhaqammada adduunka ee dabiiciga ah iyo masraxa maskaxda iyo xididdada xajmiga ah ee riwaayadaha iyo tiyaatarka waddooyinka, fannaaniinta In Heart of Beast Puppet iyo Masraxa Maskaxda (HOBT) sameyso tiyaatarka muhiimka ah, tiyaatarka quruxda leh ee da 'walba iyo asalka. HOBT waxay abuureysaa bogag si gaar ah loogu talagalay Minnesota inta udhaxeysa iyo wixii ka baxsanba, waxay baraan kalkaalisada iyo bogaaga iyadoo la adeegsanayo deganayaasha iyo seminaaro dhalinyarada, ardayda, macalimiinta iyo jaaliyadaha, waxayna soo saartaa xilli ciyaareedka asaasiga ah iyo wax soo saarka sanad walba.
Laga soo bilaabo 1973, farshaxanada HOBT waxay isticmaaleen bur, biyo, wargeys, rinji, iyo khayaali aan xadidnayn si ay u sheegaan sheekooyinka raadinaya halganka iyo dabaaldegga jiritaanka aadanaha.
Iyadoo qayb ka ah Barnaamijka Farshaxanka Barnaamijka ee lagu taageerayo howlaha ururada farshaxan ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, McKnight ayaa taageeray Masraxa Wadnaha ee Beesha Beastka. Sanadihii la soo dhaafay, HOBT waxay diiradda saartay maamulka xafiisyada biyaha, kor u qaadida wacyiga ku saabsan arrimaha biyaha iyada oo loo marayo waxyaabaha ugu muhiimsan iyo goobaha dalxiiska, qalabka farsamada dadweynaha, iyo tababarada iyo degaannada. Mid ka mid ah wax soo saarka dalxiiska, Ma baad tahay?, waa sahaminta arrimaha biyaha ee loogu talagalay carruurta da'da dugsiga dhexe. Waxqabadka wuxuu muujinayaa inta biyo ee dhulka la heli karo ee cabitaanka, isbarbardhigaya tuubada iyo biyaha dhalooyinka, waxayna ka caawisaa fahamka sida dadku uga mid yihiin wareegga biyaha magaalooyinka.
Ka dib markaad aragto waxqabad Ma baad tahay? at the Aquarium ee Great Aquarium ee Duluth, shaqaale ka ah Waaxda Khayraadka Dabeeciga ah ee Minnesota ayaa yiri, "Waxay ahayd bandhig muuqaal leh oo u baahan in lala wadaago dadka kale. Waxaa la igu afduubay sida ugu wanaagsan ee ay ula tacaaleen mawduuc kasta ee keydinta biyaha iyo sidan oo kale si ay u jaan qaadaan dadka waaweyn iyo caruurta. "
Laga soo bilaabo 1973, farshaxanada HOBT waxay isticmaaleen bur, biyo, wargeys, rinji, iyo khayaali aan xadidnayn si ay u sheegaan sheekooyinka raadinaya halganka iyo dabaaldegga nolosha dadka. Guga kasta, HOBT wuxuu abuuraa oo si buuxda u soo saari doonaa Maalinta Munaasabada Maaliyadaha iyo Pageant oo ay u dabaaldegaan tobanaan kun oo ka mid ah Powderhorn Park ee South Minneapolis.